MACLUUMAADKA IYO DOGYADA EYDA GOBERIAN DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka iyo Dogyada eyda Goberian Dog iyo Sawirro
Dahab dahab ah / Siberia Husky Mix Eyo eyda
'Waxaan ka soo qaaday sawirkeyga eeykeyga Mimi dusha sare ee guriga adeerkey. Kani waa wiilkayga 1 jirka ah ee Goberian. Iyadu waa qof aad u qurux badan oo aad u deggan.
Goberianku maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Dahab dahab ah iyo Siberia Husky . Habka ugu fiican ee lagu go'aaminayo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah in la eego dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku darka mid ka mid ah astaamaha lagu arko nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Furbee dahabka Goberian (Husky / Golden Retriever mix) 4 sano jir ka baxsan banaanka dusha sare
Furbee dahabka Goberian-ka (Husky / Golden Retriever mix) oo 4 jir ah guriga gudihiisa
Furbee Goberian-ka dahabka ah (Husky / Golden Retriever mix) markay 4 sano jirsato oo aad dhigeyso meel caleen ah.
Miya cad cad, buluug ah oo Goberian ah (Dahab dahab ah / Siberian Husky mix) sida eey yar oo jirta 4 bilood oo taagan dhagax
Miya cadaan, buluug indho Goberian (Dahab dahab ah / Siberian Husky mix) sida eey yar oo 4 bilood jir ah oo jiifa guriga
'Tani waa Leon. Isagu waa Goberian, taas oo macnaheedu yahay in kaarkiisu yahay AKC Siberian Husky oo biyo xireenkiisuna yahay AKC Dahabi ah oo Dahab ah. Ben wuxuu ku ordayaa xeebta maalin kasta ku dhowaad qof kasta oo la kulma wuxuu weydiiyaa nooca eeyga uu yahay oo wuxuu ku dhawaaqayaa sida quruxda badan iyo saaxiibtinimada leh ee uu u leeyahay iyaga. Aad buu u caqli badan yahay waqtina kuma qaadanin in guriga lagu qoro. Haatan wuxuu ka shaqeynayaa hub buuxa oo khiyaanooyin ah.
american bulldog 6 bilood jir
Madaxa madow, tan iyo caddaan Goberian (Dahabiraha Dahabka ah / Husky mix) eey yar oo ah ilaa 15 toddobaad jir - Isagu waa mid ka mid ah siddeed eeyo oo mid ka mid ah labada wiil. Wuxuu ahaa midka ugu weyn qashinka. Wuxuu kudhowaad yahay 35 rodol. haatan. Wuxuu marayaa baaritaankiisa bishii 16aad 15. Waxaan xiiseynayaa inaan arko inta uu ku kordhay bil gudaheed. Waa eey edeb macaan. Isaguba caqli badanyahay. Si fudud ayaa loo tababaray, guri iyo guud ahaanba. Hooyadiis waxay ahayd hal sano jir Dahab ah aabihiisna wuxuu ahaa Siberia Husky. Labaduba waxay ahaayeen nooc buuxa. Hooyadiis magaceeda waxaa la oran jiray Molly aabbena wuxuu ahaa Smokey. Hooyo kuligeed waa wada bunni dabcan aabbuhuna wuxuu ahaa bunni, cawl iyo caddaan. '
Madaxa madow, tan iyo caddaan Goberian (Dahab dahab ah / iskujiran Husky) sida eey yar oo qiyaastii ah 15 toddobaad
Fred The Golden Retriever / Siberian Husky mix (Goberian)
Fred The Golden Retriever / Siberian Husky mix (Goberian) banaanka barafka
Eeg tusaalooyin badan oo Goberian ah
Sawirada Goberian 1
Liiska eeyaha Siberia Husky Mix Taranka
feist mix puppy puppy for iib ah
waxa eey leeyihiin af madow
adhijir Jarmal iyo doberman Pincher mix
Jack Russell iyo isku dhafka dachshund
Pit Staffordshire Maraykan qas chihuahua
cocker spaniel isku darka poodle Guntin